गधाले कसरी कार चोर्दैछ अफ्रिकामा ? - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
गधाले कसरी कार चोर्दैछ अफ्रिकामा ?
चोरले जसरी पनि चोर्छ भन्ने उखान त नेपाली समाजमा प्रचलित नै छ । कतिपय मानिसहरु रोग लागेका कारण पनि चोरी प्रति आकर्षित भएका हुन्छन् भनिन्छ । कतै भने चोरले चोरीका लागि अनौठो विधि प्रयोग गर्न थालेका खबरहरु पनि आउने गरेका छन् । पछिल्लो समय दक्षिण अफ्रिकामा कार चोरी गर्ने गिरोहले गधा प्रयोग गरेर कार चोर्ने गरेको तथ्य प्रकाशमा आएको छ । प्रहरीका अनुसार चोरी भएको एउटा सुविधा सम्पन्न कार गधा प्रयोग गरेर लैजादै गरेको अवस्थामा बरामद भएको छ ।
गधाले तानेर जिम्बाबेतर्फ लैजान नदी पार गर्न लागेको अवस्थामा कार बरामद भएको थियो । स्थानीय प्रहरीका अनुसार कार तस्करी गर्ने कोशिश असफल भएपछि चोरहरु जिम्बाबेतर्फ भागेका थिए । गत वर्ष डिसेम्बरमा पनि डर्बनबाट चोरी भएको एक कारलाई नदी पार गराउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले फेला पारेको थियो । उक्त कारलाई पनि गधाले तानेर लगिदैं गरेको अवस्थामा फेला पारिएको प्रहरीले जनाएको छ । कार लैजान गधाको प्रयोग किन भइरहेको छ भन्नेबारे प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ ।
प्रहरीको अनुमानअनुसार आधुनिक सवारी साधनमा सामान्यतया ट्रयाकिङ्ग उपकरण जडान गरिएको हुन्छ, जसको मद्दतमा कार कहाँ छ भन्ने थापा पाउन सकिन्छ । उक्त उपकरण कार स्टार्ट गरिएको अवस्थामा मात्र सक्रिय हुने भएकाले चोरहरुले कारलाई स्टार्ट नगरी गधा प्रयोग गरेर लैजाने गरेको हुन सक्ने अनुमान प्रहरीले गरेको छ ।